Mashruuc magiciisa la dhoho Baskiilo loogutalagalay dhamaan dadka Maine degan ayaa bilaabayana xiliga 2019 - Amjambo Africa
Mashruuc magiciisa la dhoho Baskiilo loogutalagalay dhamaan dadka Maine degan ayaa bilaabayana xiliga 2019
4 women learned to ride a bike during the Bikes for All Mainers program, completed the final ride, and earned bikes to ride home and keep! Photo by Ainsley Judge
Baskiilo loogutalagalay dhamaan dadka Maine waa mashruuc bilaash ah oo loogutalagalay dadka waa weyn oo raadinaya in ay helaan gaadiid qeyma jaban agagaarka magaalada Portland Waxaana uu bilaabanayaa dhawaan 2019. Mashruuca waxa uu kadhacaayaa xarunta loo yaqaana Portland Gear Hub, waxaana kala shaqeynaya Hay’ada loo yaqaana Bicycle Coalition of Maine. Ardeyda barnaamijkaan kujirto waxay baranayaan sida loo hagaajio baskiilada iyo shuruucda wadooyinka markaad baskiil kusocotid. Ardaydii dhameysta tababar 6 saacadood ah waxa uu helaayaan baskiil shaqeynaya oo lasoo hagaajiyey iyo koofiyad looga tala galey Baskiilada iyo wixii alaab ah oo loo isticmaalaaya difaaca jirka.
Bikes for All Mainers waa tusaala xoogan oo tusinaaya waxa dhaca kara markaay shaqsiyaad fahmaan baahi jirto oo diiwaan giliyaan ha’adaha aan dowliga eheyn si ay u xoojiyaa gaaritaanka baahida jirta. Nathan Hagelin ayaa ogaadey shan sano ka hor in dadka soo galootiga ah in ay ku isticmaalam kharash badan si ay uraacaan baabuurta ama ay ulugeynayeen si ay ugaaraan meelaha ay usocdaan sida goobaha shaqada iyo wax barshada ayakoo degan meela kala duwan ee magaalada Portland.
Mr Nathan ayaa laxariirey ninkaan loo yaqaana Jim Tasse oo ah Caawiyaha maamulaha Hay’ada Bicycle Coalition of Maine si uu ugaga helo caawimaad. Jim, waxaa caawiyay Erick iyo Shannon Belt labadaaas oo awal isku keeni jiray wixii Baskiilo ah ooy hele karaan si ay uugu qeybiyaan dadka soo galootiga ah. Mashruucaas oo ladhihi jiray “ sidii loola macaamiili lahaay gawaarida markaad baskiil kaxeynaysid. 2014 waxay sameeyeen mashruuca la dhoho “ baaskiilo loogu talagalay soogalootiga, magacaas oo hadana loobadalay “baaskiilo loogu talagalay dhamaan dadka dagan Maine” sanadku markuu ahaa 2017.
Kadib markii la ogaadey in baahida kajirto dhinaca baskiilada anaay ku ekeen qaxootiga oo kali ah dadkaasoo ka faaisankara. Isla sanadkaas ayaa waxaa wada shaqeen biilaabey Bicycle Coalition iyo Bikes for ALL Mianers iyo maamulaha Portland Gear Hub Anisley Judge si qeeb mashruuca ka mid ah looga wareejin lahaa Portland Gear Hub.
The Portland Gear Hub, oo kaashaneysa Bicycle Coalition of Maine waxaay gacanta ku haayaan in ay sameeyaan baskiilada iyo in ay meeleeyaan tabarada iyo in shaqaalohooda waqti kubixnta si uu uhergalo qorshahaan. Hada waa sanadkii shanaad Bikes for All Mainers ayaa wali la shaqeynayaa Portland Gear Hub iyo Bicycle Coalition of Maine ayakoo ka sahqeynaya in ay xal u helaan dhibaatada gaari raaca ka haysta dadka reer Maine kuwa cususb iyo kuwii horey ujoogeyba. Mashruuca waxa dhiiri gilinaya caafimaadka, iyo jimicsiga. Waxa kala uu yareynayaa qiiqa wasaqta ah ee gawaarida kabaxda. Waxa uu dadka baskiilada wada waxaas usahlaa in ay fahmaan sidii ay baskiil uuga dhax wadan lahaayeen Gawaarida.
Waxaan Mahad gaarsineynaa Bicycle Coalition of Maine mashriuucaan waxaa ka faaideystety 50 ardey sanadkaan sanad hore waxay ahaayeen 36. sandkaan 2019 waxaan dhaqaala ka helney Bangor Saving Bank waxaan biliaabi doonaa Bisha Afraad 29 ilaa iyo Augusta ayuu soconayaa. Tababarka waxa ka soconayaa Portland Gear Hub school kuyaala 85 Anderson St ayadoo jidkana lasaari doono ardeyda qofkii reer Maine ah oo ubaahan waa in uu ahaada 18 jir iyo ka kor waa in uu baskiil wadi aqaanaa. Waa in codsigiisa usoo gudbiyaa Portland Gear Hub oo kutaala 155 Washington Ave ka hor waqtiga Glasska waxaa kaloo ka buuxin kartaa webseyka https://portlandgearhub.org/bikes-for-all-mainers/
PreviousFire Safety in Our Homes
NextBisha afraad iyo dhaqmada kala duwan ee tima tidcista
Waxaa la cusbooneysiiyaa COVID-19 Delta kala
Banaynta dariiqa aaminaadda tallaalada
Khudrad Afrikaan ah oo cusub ayaa laga heli karaa halkan Maine!
Faa’iidooyinka iyo qasaaraha qaababka lacag dirista
Miyaan bilaabaa samafal si aan ugu caawiyo dadka guryahooda ku nool?